Agụmakwụkwọ isi ihe eji eji Revit - Geofumadas
Ọkachamara - CivilWorks
Ọkachamara - Geospatial
Ọkachamara - LandWorks
Ọkachamara - Nhazi BIM
Ọkachamara - BIM MEP
Ọkachamara - Ọrụ BIM
Ọkachamara - Nlereanya 3D
Ọkachamara - Ndụ Ndụ
Ihe nkuzi nke obodo 3D
3Ds Max ọmụmụ
Usoro CREO Parametric
Usoro Nhazi usoro iji Revit
Julaị, 2019 AulaGEO
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Revit maka imepụta oru ngo
N'ime usoro mmụta a, anyị ga-elekwasị anya n'inye gị ụzọ kachasị mma iji rụọ ọrụ nke Revit maka ụdị ụlọ dị na ọkwa ọkachamara na obere oge. Anyị ga-eji asụsụ dị mfe nghọta ma dị mfe nghọta wee were site na ntọala gbakwunyere ojiji nke nnukwu mmemme a.
Ezigbo ihe mere ị ga-eji mụta Revit bụ iji teknụzụ BIM. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-abụ mmemme iji dọpụta ụlọ. Mana dị ka ị ga-ahụ n’usoro, enwere ọtụtụ ndị ọzọ na-akpata mmemme a dị ike. Anyị ga-ekwusi ike na njikwa ihe ọmụma.
N’adịghị ka usoro ọmụmụ ndị ọzọ na-ejedebeghị n’igosi ihe eji eme ihe, anyị ga-enye gị ndụmọdụ ga-enyere gị aka ịme usoro BIM n’ọrụ gị.
Ihe omumu - 3D Model Usoro - BIM Ọrụ Usoro nkuzi
Previous Post«Previous Okwu Mmalite iji chepụta usoro iji Ansys workbench
Next Post Revit MEP Agụmakwụkwọ (Mechanics, Electrical and Plumbing)Next »
Otu nzaghachi nye "Ntọala nkuzi nkuzi site na iji Revit"
Abdurahim kwuru, sị:
April, 2020 na
BIM video darliklarini onye isi oche
AllIhe omumu - 3D ModelUsoro - BIM MEPUsoro - BIM ỌrụUsoro - BIM StructureUsoro - CivilWorksUsoro - GeospatialUsoro - LandWorksUsoro - Ndụ Ndụ
ArcGIS Pro N'ezie - isi
Mụta ArcGIS Pro Easy - ọ bụ usoro emebere maka ndị na-anụ ọkụ n'obi nke sistemụ ozi gbasara ala, ndị chọrọ ...
Usoro Dynamo maka ọrụ injinịa BIM
BIM Computing Design Ihe omuma a bu ihe enyi na ntinye ntinye nke uwa nke ihe mmeputara site na iji Dynamo, ikpo okwu…
Usoro AutoCAD - mụta dị mfe
Nke a bụ usoro emere iji mụta AutoCAD site na ncha. AutoCAD bụ sọftụwia kachasị ewu ewu maka imepụta enyere aka ...
Kedu ihe bụ nyocha akụrụngwa nke isi na GIS?
Kedu ihe nyocha netwọkụ?
Mụta maka Synthetic Aperture Radar (SAR) na atụ
Kedu ihe bụ ọdịdị ala?
Gịnị bụ maapụ?
Copyright © 2021 ị egeomates
Ọkachamara BIM MEP - awa 32 nke vidiyo - 100% n'ịntanetị
1. MEP - sistemụ ọkpọkọ U $ 24.99
2. MEP - sistemụ eletriki… .. U $ 24.99
3. MEP - Sistemụ HVAC ……… .. U $ 24.99
4. Usoro BIM ……………… U $ 24.99
6. Nastran onye nchoputa …………………… .. U $ 24.99